Taageerada email info@qdruidetai.com
Taageerada Call 86-18661631650
Wire rakiban End Xarig
Ahama Steel Products
Crosby Mini abuurtay kala kulmi Nooca Xamuulka galalka Turnbuc ...
G450 HDG US Nooca dejinta abuurtay Wire Clamps Xarig
M16 C15 Zinc plated CR3 DIN582 abuurtay qaadayso Loos Eye
Dhex Hot galvanized G403 daanku End ay ishu
Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Daawaha Steel Red rinji dejinta abuurtay Eye tiiri Liftin ...
Ahama Steel Long D Biro Naar Long Type
1. Sharaxaad ka mid ah Nooca ahama Steel Long D Biro Naar Long
Waxyaabaha: ahama Steel, SS304 ama SS316
Habboon ee loo isticmaalo qaaditaanka
2. faahfaahinta Product ah Nooca ahama Steel Long D Biro Naar Long
Item: ahama Steel Long D Biro Naar Long Type
Nooca: Nooca Long
Size:ka 4mm in 12mm
Xirxirida: bac PP + kartoonka + sariirtaada, ama sida ay macaamiisha '
Dekedda Load: dekedda Qingdao ama dekedaha kale ee Shiinaha
Shipping, by markab ama diyaarad
1. Ma waxaad tahay shirkad warshad ama ganacsi ah?
Waxaan bilaabay warshad silsilad barroosinka ku saabsan 20 sano ka hor iyo si tartiib tartiib ah u hormaray saaraha weyn ee sahayda badda.
Isla mar ahaantaana, si loo daboolo baahida kordhaysa ka macaamiisheena goobaha ganacsiga cusub, waxaan balaariyay baaxadda our in hardware isdabamarinta iyo qaybood ah, iyo hardware kale ee la xiriira by samaynta iskaashi adag la warshado kale.
Hadda waxaan nahay kuwa kibirka leh oo u sheegay in Rui DE tai ayaa kaalinta qeybiyaha ah top on silsilado & hardware ku shubatay ee waqooyiga China.
2. Xaggee aad warshad ku taala?
Our warshad ku taalla Jimo, Qingdao City, Gobolka Shandong, Shiinaha.
Waad soo dhaweeyay in ay na soo booqato mar kasta iskaashi mustaqbalka.
3. Waa maxay waxyaabaha ha idin siin?
Sida kor ku xusan, qeybinayay cayn kasta oo sahayda badda, silsilado, hardware ku shubatay, qaybood ah, iyo hardware la xiriira.
4. Sidee baad u xakameeyo tayo leh?
By samaynta dhibcood tayada iyo baarista ee geedi socodka kasta oo wax soo saarka la mustawe aad u adag, wax soo saarka haleysan waa laga saarayaa ka hor inta baakado iyo dhalmada.
Waayo, warshadaha lamaanahaaga, aan u isticmaalno nidaam dhamaystiran oo ka mid ah heerarka tayada si ay u qiimeeyaan line-soo-saarka ah. Sidoo kale kooxda QC xirfad dhaqan galin doonta jeegga ayaad jeceshahay iyo dhameysan jeeg alaabta ka hor dhalmada.
5. Waa maxay sababta aad wax dheeraad ah la aamini karo badan warshado kale oo jira?
Waxaan warcelin su'aalo aad si deg deg ah 24 saac maalintii, 7 maalmood toddobaadkii kasta.
Waxaan ku siin karnaa qiimo badan oo tartan ku salaysan heerka tayada la mid ah ay maamulka ku ool ah in geeddi-socodka kasta.
Just odhan waxa aad u baahan tahay, iyo waxaan fahmi doonaa xal one-stop ah ee aad ganacsi si loo badbaadiyo
waqti iyo dadaal aad.
6. Sidee ayaan u bixyaa?
Aqbalayno 30 bixinta% ka hor & 70% ka hor shixnad iskaashi ugu horeeyay, labada by T / T ama L / C.
7. Sidee baan u heli alaabta?
Iyadoo wakiilada gaadiidka xirfadeed, waxaan awood u waxyaabaha dhalmada si dekedaha ugu adduunka oo dhan. adeega albaab-ilaa-albaab waxa ay sidoo kale taageerto. FOB, C & F, CIF waxaa inta badan loo isticmaalaa marka la eego ganacsiga.
Welcome si ay u iibsadaan iyo jumlada our iibinta kulul ahama Biro Naar dheer d nooca dheer. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha waxyaabaha ugu xirfadeed oo keentay isdabamarinta iyo ganacsatada. Fadlan si xor ah u saamiga free naga hesho oo xiriir warshadda for info dheeraad ah.
Previous: 55T 2 1 / 2US Nooca Bolt Nooca Chain Biro Naar G2150
Ahama Steel 304 Spring SNAP Hook Carabiner ...
5/16 iyo 25 mm BS464 Wire Xarig biire
Nooca Lever galalka Load Chain abuurtay Small
3 / 4inch G209 US Nooca Ku marooji Pin Bow Biro
8mm Small 316 ahama Steel silsilad Link Quick
Waa maxay isticmaalka clips Xadhig silig?
ahama Thimbles xiriir
Waa maxay qiimaha ahama Thim ...
Biro Naar isdabamarinta ee isticmaalka Pr ku ...
Dirka iyo qabsatooyinkoodiiba, kor u